8-dda March, Maalinta haweenka iyo Halgankii dheeraa ee la soomaray!.
W/Q: Suldaan Nayruus Xaaji Aadan.
Horraantii qarnigii inasogoontiyey (qarnigii labaatanaad) ayaa haweenku waxay sameeyeen dhaq-dhaqaaq xooggan oo ku aaddan cod-bixinta doorashooyinka, gaar ahaan waxay dhaq-dhaqaas ka sameeyeen waddamada USA, Great Britain, iyo France. Dhaq-dhaqaaqa xuquuqda cod-bixinta ee haweenka ayaa wuxuu bilowday 70 (todobaatan) sano kaddib markii laqabtay shirweynihii rasmiga ahaa ee haweenka (Formal women�s convention) July 1884-kii lagu qabtay Senece falls, New York, waqtigaasoo laga gudbay haajinta qodobkii 19-aad ee Axdiga u yiilay Maraykanka.
Akhri qaybaha labaad... Guji